Ixesha kunye nabahlobo 63
Ngaba imfundiso ye-Theosophika yokubandezeleka kwethu emhlabeni njengemali yokubuyisela i-kararmic retribution, ngokubhekiselele kwi-Theological statement yokubandezeleka kwethu njengento yokubuyisela esihogweni, kuzo zonke zombini izibongo kufuneka zamukelwe ngokholo nje; kwaye, ngokubhekiselele, omnye ulungele enye nje ukuvelisa ukuziphatha okuhle?
Zombini iimfundiso zisekhompyutheni, kwaye kufuneka zithathwe elukholweni kuphela ngelixa ingqondo ikwimeko engekho ngqondweni okanye yomntwana. Iimfundiso zamkelwe, ngokufanayo njengoko i-alfabhethi kunye netafile yokuphindaphindwa ithathwa ngumntwana-kukholo.
Xa ingcinga yokuqiqa ivavanya iimfundiso, ifumanisa ukuba ukubandezeleka emhlabeni kusekwe emthethweni nakwezomthetho kwaye kungqinwa ngamava obomi, nokuba imfundiso yesihogo ngumthetho ongalawulekiyo oqulunqwe ngumgaqo-nkqubo wezenkolo. Ingqondo ayinakufumana sizathu sokubandezeleka okungapheliyo esihogweni njengembuyiselo yezenzo ezigwenxa ezenziwa ngokungazi kubomi obufutshane emhlabeni, ngakumbi xa ubugwenxa bubonakala bunyanzelwa rhoqo ziimeko kunye nemeko-bume, engabangelwa ngulowo ugulayo.
Ukuphindukuzalwa, kunye nokubandezeleka emhlabeni njengempindezelo ye-karmic, xa isetyenziselwa ukuchaza iinyani zobomi, zifunyenwe zisebenza ngokomthetho, ngokufanayo netafile yokuphindaphinda kunye ne-arithmetic. Ukubandezeleka kuthathwa njengesiphumo sokwenza okuphambene nomthetho, kwaye kungesohlwayo, kodwa amava ayimfuneko ekufundeni ukuba angenzi njalo. Kuyinto ebolekwe kakhulu kubukrelekrele ukuba umhlaba kunye nendawo yomntu kuwo ziziphumo zomthetho kunokuba ziziphumo zokoyisakala.
Imfundiso yemfundiso yesihogo ayinakutshiwo ngokuqinisekileyo malunga nokuba imalunga nemfundiso yokuphindezela karmic, ukuvelisa ukulunga kokuziphatha, kuba akunakuze kuzalwe amandla okoyiko. Imfundiso yesihogo kukunyanzela ukulunga ngenxa yokoyika ukohlwaywa. Endaweni yoko izala ubugwala ngokuziphatha kwaye iphakamisa isenzo esingenabulungisa.
Imfundiso yokuziphindezela karmic ngokuvela ngokutsha, inceda ingqondo ukuba ifumane indawo yayo kwaye isebenze kwihlabathi, kwaye iyibonise indlela eyinyani ebomini. Ukulunga kokuziphatha sisiphumo.
Akukho bungqina besihogo semfundiso yesiqhelo. Ingqondo yobulungisa ivukela kwaye ikhuphe uloyiko kuyo njengoko ingqondo ikhula ngamandla nasekuqondeni. Ubungqina bekarma yimbono yobulungisa bendalo emntwini. Ukukwazi ukuyibona nokuyiqonda, kuxhomekeke kukuvuma kwakhe ukubona ukungalunganga kwakhe nokulungisa ngesenzo nje.